2009 Yamaha FZ6R Ukubuyiselwa kweMidlalo yeeMoto
I-Kinder, iGentler Sportbike ukusuka kwi-Yamaha
I-Yamaha FZ6R ka-2009 inokufana ne-R6 enobukrokra ekuqalekeni kwayo, kodwa ngokwenene inxalenye entsha ye-FZ6 ye-naked. Ukuzibhenela kubagibeli abatsha abafuni ukuyeka ukubonakala kwezemidlalo okanye i-credited street, i-FZ6R izama ukudibanisa ukuhamba kwansuku zonke ngokusebenza kakuhle. Ngaba i nikela?
Kwintliziyo ye-Yamaha FZ6R ka-2009 i-600cc e-cooled-line-line-4 esekelwe kwisigxina se-FZ6, kunye nenani leemods kuquka i-camshaft ixesha elungiselelwe i-torsha ye-camshaft kunye nebhokisi lemoya enkulu.
I-injection fuel fuel Mikuni inemibhobho emine ye-32 mm ye-throttle, kwaye injini entsha ithembisa iimitha ezili-43 nge-gallon, i-8% yokuphucula i-FZ6.
Ukufakela amandla okutshatyalaliswa kumbane ukuya kwi-6-speed speed transmission, kunye nokukhwa kwe-4-2-1 ephakamileyo phakathi kwamehlo afana neyunithi efunyenwe kwi-R6. Injini isebenza njengelungu elixininisekile, kwaye linyanzele linyuka kwisakhelo esitsha sensimbi. Ifoloko yangaphambili yinto engagqibekanga yeyunithi ye-SOQI engama-41 mm, kwaye emva kwayo i-SOQI elandelelaniswayo ngaphambili. I-Brembo master cylinders inomusa kwi-disc ngaphambili kunye neerki zangasemva zangasemva.
Ukuthelekiswa ne-FZ6, indawo ye-handlebar ye-FZ6R ingama-12 mm ngasemva kunye no-12 mm ngaphantsi, ngelixa isihlalo si-4 mm phambili kunye no-2 mm ngaphantsi; ezi tshintsho zinciphisa unxantathu okhweleyo, okwenza ibhayisikili ibonakale encinci. Isihlalo esiphezulu se-inthanethi esingama-30.9 singashukunyiswa ngaphezu kwe-20 mm. I-Instrumentation iquka zombini ama-analog ne-digital readouts.
Ukuphosa Umlenze Ngaphezulu: Ududuzo nguKumkani
Ngokungafaniyo nemidlalo yonke, i-Yamaha FZ6R yenzelwe ngakumbi induduzo kunokuba isebenze phezulu.
Ukufikelela kwiiphathabars akukude kakhulu, i-saddle igxininiswe kakuhle, kwaye nangona amadolo akho egoba ngenyawo ukubekwa kwesikhonkwane, akukho nto idlulileyo malunga ne-ergonomics yebhayisiki. Enyanisweni, emva kokukhwela kwemihla kwakungekho nantlungu okanye iintlungu ezithethayo-gcina iindwangu ezimbalwa kwiqondo lokubanda elibandayo.
Uluhlu lwe-FZ6R lufana nelo (njenge-dash Suzuki GSX650), kodwa ngelanga i-Yamaha ayinaso isalathisi segesi yedijithali.
I-Ride - Smooth Sailin '
Ukuphikisa i-FZ6R ye-throttle ngelixa ibhasikiyali ingathathi hlangothi, kwaye inqaku le-injini engenakonakalisa ukukhupha ibonakalise inqaku elifihlakeleyo lokuqhaqhafaza-akukho nto inokugqithiseleyo njengoko i-titanium i-tanflethi ye-R6, kodwa leyo ifanelekileyo ngokufanelekileyo kwesi sikolo esikujoliswe kuyo: .
Iintlobo ze-clutch kunye nokukhishwa kwimizamo yokukhupha i-lever, kwaye isenzo sokutshintshwa kwebhobho yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi yesigxina ivakalelwa ngokuchanekileyo. Ukukhawuleza kuhamba ngokukhawuleza kwaye kuluhlu, kunye nombhobho onamandla ovakalelwa ukuba uphawule kwaye uqikelele. Kukhona umnqweno wokugubha kwi-6,000 rpm, kodwa loo nto ayifumani endleleni yokuzonwabisa ngokukhawuleza yonke indlela ukuya kwi-12,000 rpm redline. Ukukhwela kwi-throttle malunga ne-1/3 ye-revs esiphezulu kubonisa ubuncinane bokukhawuleza, kodwa kwakhona umgangatho awukho okwaneleyo ukuvimbela abathengi. Ngexesha lokuhamba nge-60 mph injini i-injini i-rpms ilinganiswe malunga ne-5,000 rpm-indawo ephakamileyo yokukhwela emide.
Ekubeni ijolise kubagibeli abatsha, i-FZ6R yangaphambili iibhuleki ayinakuyibamba kakhulu (oko kungenza kube lula ukukhiya isondo langaphambili), kodwa i-bite yangaphambili eyayiza kuqala yamkelekile.
Ukukhawuleza kuyomeleleka xa ukhankanya phezulu, kwaye nangona injini ijongene nebhola le-torque elingaphantsi kunye ne-midrange, i-600 cc yokufuduka kwayo iyimvimbela ekutsaleni kakhulu. Ukusingatha kufana nokugqithisa kwaye ukuzinza kukugqwesileyo, nangona abagibeli abanogqirha baya kufuna ukudayela ekulandweni kwangaphambili kwimpendulo ephilileyo. Ngelishwa, ukutshitshiswa kwangaphambili akulungelelanisi.
Iimitha ezili-150 engazisebenzisileyo kwi-Yamaha FZ6R zadlula ngokukhawuleza, kwaye ibhayisikili yayiphatha kakuhle iindlela zeentaba ezinobungcali; yayiyinto enamandla kwaye inamandla ngokwaneleyo yokukhwela, kodwa isithuba sayo sokuhlala esilungileyo kunye nokumiswa kokukhawuleza kwongezelela inqanaba lokuthuthuzeleka ongenakukufumana kwiindawo ezininzi zemidlalo.
Akunakho ukuphela kwe-Yamaha ye-R6, kodwa yiyona nto ingqinayo ye-FZ6R: ngumntu onomusa, onobuhle othabatha umdlalo kulabo abafuna ukubukeka kwezemidlalo ngaphandle komnxeba wesandla okanye ukusebenza okugqithiseleyo.
Ukunikezelwa kwee-parameters, i-FZ6R yindlela eyanelisayo yabaqalayo kunye nabagibeli abanolwazi ngokufanayo.
I-Augusta National Golf Club Iifoto
Iimpawu ezi-5 ezilungileyo ze-BBC Dad Video
Yiyiphi enye indawo ejongene nokusingqongileyo, oMmandla waseMadolobheni okanye oPhandle?
I-First Credit Card
Iifom ebomvu: Inkqubo emfutshane